Ugbu a dị na Cubot MAX3 nwere igwefoto 48 MP maka $ 99 | Androidsis
Cubot gbara mbọ na -emepụta ụdị ekwentị dị iche iche iji gboo mkpa na akpa ndị ọrụ niile. Site taa, ọhụrụ ọhụrụ Cubot MAX3 na ihuenyo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 7 na Cubot KingKong 7, ekwentị mkpanaaka maka ihe na -achọsi ike, dị ugbu a maka ịzụta.
El KingKong 7 dị maka $ 179,99 na MAX3 dị ugbu a maka $ 109,99 na AliExpress. Ndị ọrụ nwere mmasị ịzụrụ ya, nwere ike gaa na ibe ngwaahịa na AliExpress iji nweta Kupọn nwere oke nke na -ebelata ọnụahịa nke ụdị MAX3 na $ 99,99.
1 Nkọwapụta Cubot MAX3
2 Nkọwapụta Cubot KingKong 7
3 Ugbu a dị maka ịzụta
Nkọwapụta Cubot MAX3
Cubot MAX3 nwere nnukwu ihuenyo 6,95-inch HD, yana bezels dị warara nke na-enye ya ohere ịnye akụkụ nke 20.5: 9 nke na-enye anyị ohere nlele ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu ma ọ bụ ihe nkiri kachasị amasị anyị.
Ọ nwere atọ 48MP n'azụ igwefoto site na ọgụgụ isi nke nwere ike ịmata ihe nkiri na -akpaghị aka iji nye ihe kacha mma, a 16MP igwefoto n'ihu nwere ọgụgụ isi nke na -ebelata ezughị oke akpụkpọ yana ọ dị mma iji nye anyị ohere iji ihu anyị mepee ekwentị.
A na -akwado Cubot MAX3 site na onye nrụpụta Octa-core nwere 4GB Ram + 64GB nke nchekwa n'ime, enwere ike ịgbasa nchekwa ahụ ruo 256GB site na kaadị TF.
Ihe nhazi 8-core nke anyị na-ahụ n'ime Cubot MAX3 na-esonyere ya 5.000 mAh batrị, karịa iji nweta ihe kachasị na ekwentị gị wee jiri batrị zuru ezu bata n'abalị.
A na -ejikwa ya nke ọma Ngwa gam akporo 11, na -enweghị ụdị nhazi nhazi ọ bụla. Na -agwakọta a NFC mgbawa nke anyị nwere ike iji zụta ihe kwa ụbọchị site na Google Pay.
Nkọwapụta Cubot KingKong 7
KingKong 7 na -ebupụta dị ka ekwentị adịchaghị mma nke nwere ekwentị 64MP igwefoto ịbụ Cubot kachasị arụ ọrụ arụrụ arụ nwere njiri mara mma yana njiri mara mma.
Isi ihe dị na Cubot KingKong 7 bụ sistemụ igwefoto nwere oke nkọ. Ejiri ngwaọrụ a okpukpu atọ n'azụ igwefoto na gụnyere a 64MP isi oghere, oghere ultra 16MP obosara akụkụ na nlele ogo 124 na a 5M oghere macro.
La n'ihu igwefoto, na-enye anyị a 32 MP mkpebi ma na -eji ọgụgụ isi mmadụ wezuga obere ezughị oke akpụkpọ anụ na mgbakwunye ikwe ka anyị jiri ihu anyị mepee ohere ịnweta ngwaọrụ ahụ.
The Cubot KingKong 7 nwere IP68 & IP69K kwadoro maka iguzogide mmiri, uzuzu na ọdịda. Ọ nwere ihuenyo inch 6,36 nke nwere mkpebi ihuenyo FHD + (1080 * 2300）) nke na-enye onyogho dị nkọ ma dị egwu karịa nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ foto na vidiyo anyị ji ọnụ rụọ na mgbakwunye na ụdị ọdịnaya ọdịnaya ọ bụla.
N'ime ngwaọrụ, anyị na -ahụ nhazi Helio P60 nke MediaTek, 8-core processor na-eso 8 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa. (oghere anyị nwere ike ịgbasa ruo 256 GB site na iji kaadị microSD).
Nrụpụta nke ihe nrụpụta yana 8 GB nke Ram na -enye anyị ohere ịme ọtụtụ ngwa n'otu oge idobe oriri batrị n'ọnụ mmiri.
Batrị nke KingKong 7 na -enye ruru 5.000 mAh, batrị karịa ka ị nweta ihe kachasị na ekwentị gị ụbọchị niile na -enweghị mwakpo nchekasị ma ọ bụrụ na batrị agwụla anyị ma ọ dịkarịa ala oge kwesịrị ekwesị.
Dị ka Cubot MAX3, KingKong na -achịkwa ya gam akporo 11 na -enweghị nhazi nhazi ma jikọta a NFC mgbawa, nke na-enye anyị ohere iji Google Pay ịzụrụ ihe kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị na -achọ ekwentị nwere gam akporo dị ọcha, na -enweghị nhazi nkeonwe, otu n'ime nhọrọ kachasị mma ị nwere n'ahịa dị na ọdụ a. Ka ọ dị ugbu a, anyị amaghị ma ọ ga -enweta mmelite gam akporo ọzọ, mana ebe anyị chọpụtara na ọ bụ n'ezie Google na -ahụ maka usoro niile ma a bịa na gam akporo dị ọcha, ọ gaghị eju anyị anya na Cubot MAX3 emelitere na Android 12 na ọbụnadị gam akporo 13, mana ozi ugbu a bụ onye nrụpụta maara ya.
Ugbu a dị maka ịzụta
Dị ka akụkụ nke onyinye izizi ụwa ya, Cubot MAX3 Ọ na -akwụ ụgwọ na $ 109,99. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ na -enye anyị obere ego mbelata ego na -amalite taa na -enye anyị ohere ịnweta MAX3 naanị $ 99,99.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Cub EzeKong 7Ị nwere ike nweta ya na ọnụ ala dị ala nke $ 179,99 kwa na AliExpress site taa.
Cubot na -enye ụdị ekwentị abụọ nwere ọnụ ahịa na atụmatụ dị iche iche izute ọtụtụ mkpa onye ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a, mee ọsọ ọsọ họrọ nke masịrị gị, tupu onyinye a agwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ugbu a dị na Cubot MAX3 nwere igwefoto 48 MP maka $ 99
Realme GT Master Edition, imewe ndị Japan iji chegharịa ihe ịga nke ọma [Analysis]